Lacagta Bulshada: Abaal mari Macaamiishaada Markay Wax Wadaagaan | Martech Zone
Dadka badankood waxay bixiyaan qiimo dhimis iyo dalabyo ay ku kasbadaan macaamiil cusub. Tani waa caqli xumo markaad ka fikirto, sidee ku saabsan abaalmarinta macaamiisha horeba u qarash gareynayay? Xaqiiqdii, ka waran macaamiisha abaalmarinta leh ee la wadaagaya xaqiiqda ah inay kaa iibsadeen shabakadaha bulshada?
Xilligan la raad raacayo in ka badan 30% heerka beddelashada, Lacagta Bulshada waa madal qurux badan. Kaliya maaha inaad isticmaaleyso ereyga suuqgeynta afka, waxaad sidoo kale bixineysaa dhiirigelin aad ku abaalmariso macaamiishaada ugu fiican iyo iyaga oo siinaya qiimo dhimis ay ku soo laabtaan oo ay wax dheeraad ah u iibsadaan! Tani waa tan ugu fiican adduunka oo dhan!
Kireyso macaamiishaada inay kula wadaagaan astaantaada guud ahaan Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, iyo LinkedIn si ay uga kasbadaan lacag kaash ah waxyaabaha ay hadda iibsadaan iyagoo ku saleynaya taraafikada ay kuu keenayaan. Farriintaadu markiiba waa la geliyaa jadwalkooda, quudintooda, iyo looxyadooda - maaha sida xayeysiisyada shabakadda ee saamaynta yar, laakiin waa mawduucyo isdaba-joog ah oo xoog leh oo dhab ahaan la arko loona akhriyo
Markaad iska hubiso, macaamiishaada waxaa la siiyaa ikhtiyaar ay ku kasbadaan boqolkiiba hore loo go'aamiyay oo ay dib uga soo celiyaan iibsigooda hadda markay la wadaagaan suuqgeyntaada shabakadda bulshada ay ugu jecel yihiin. Waxay isla markiiba ku kasban karaan lacag caddaan ah kaliya dhajinta - ka dibna kasban karaan xitaa intaa ka badan markay saaxiibadood ku riixaan xiriirkaaga la dhejiyay.
Waxa ugu fiican, Lacagta Bulshada waa halis la'aan. Ma jiraan wax lacag ah oo lagu rakibayo software-ka oo kaliya ayaa la siiyaa markay bixiyaan macaamiisha cusub. Khidmadda Soo-celinta Bulshada waa 15% ka mid ah lacag-celinta ay dalbadeen macaamiishaadu. Taasi waxay ka dhigan tahay haddii aad bixiso $ 10.00 oo soo-celin ah, khidmadda adeegga Lacagta Soo-celinta Bulshada waxay noqon doontaa $ 1.50. Tani waxay daboolaysaa dhammaan macaamil ganacsi, ka shaqeynta, iyo kharashyada dirista.
Tags: dhiirigelintalacag celinganacsiga bulshadakuuboon bulshadaganacsiga bulshadadhimista bulshadaerayga afka